Truth be known: 2006
ဘုံကျော်ဆရာတော် မကြိုက်တဲ့ မန္တလေး
ဘုရား လက်ညှိုးထိုးတဲ့ မန္တလေး
ဦးရာမကို ဗန်းမော်ပို့တဲ့ မန္တလေး
မင်းသွေးတို့ မြေခတဲ့ မန္တလေး
မြို့မငြိမ်း အခြေမလှခဲ့တဲ့ မန္တလေး
“အောင်ကျော်ချမ်းအေး မန္တလေး” တဲ့
ချမ်းအေးရဲ့ မချမ်းအေးရဲ့ ဆိုတာ
အောင်ကျော်နဲ့ တွေ့မှ မေးကြည့်ပါ…။
ခင်ဗျား လိမ်ထုတ်ထုတ်၊ မထုတ်ထုတ်
ကဗျာဆရာ ဘယ်နဲ့လုပ်သိပါ့မလဲ။ ။
၁၉၉၆ ထုတ် ရာစုသစ် မြစ်ကျဉ်း ၊၄၊ မှ ကဗျာပါပဲ။ ကဗျာစာမျက်နှာမှာ မီးပွုင့်ပုံလေးနဲ့ စက္ကန့်အချိန်ပြနံပါတ်ကို တရုတ်စာနဲ့ ထိုးထားပါတယ်။ scanner မရှိလို့ ခံစားလို့ ရအောင် ပြောပြတာပါ။ နားလည်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ၂၀၀၇ ဖြစ်ပါစေ။
Posted by generation96 at 3:12 PM0comments
Posted by generation96 at 2:10 PM0comments
Christmas is coming, New Year is approaching. Regardless of race, religion, and belief, people are enjoying holidays.
But there are those who couldn’t enjoy the holidays. But there are those who wouldn’t even know what the holidays mean. But there are those who would so yearn to enjoy the holidays with the love ones.
May the world be fair…..or may we be able to make the world fair.
Posted by generation96 at 2:13 AM 1 comments
Posted by generation96 at 11:23 AM5comments
၈၈ အကြောင်းရေးမှတော့ ပစ်ခတ်တာတွေလည်း ထည့်ရေးဖို့တော့ လိုပါတယ်။ Blog စရေးခါစက တခါရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတခေါက်က ကျနော့် အမြင်မဟုတ် နားနဲ့ကြားရတာတွေ ပြောပြမှာပါ။
၈၈ ဟာ မတ်လ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းထဲ လုံထိန်းတွေ ၀င်ပစ်လို့ ကိုဖုန်းမော် ကျဆုံးတာကနေ စလိုက်တာ အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ထိ အသက်ပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါ။ အင်းယားကန်ပေါင်မှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ လုံထိန်းတွေ လက်ချက်နဲ့ ရေနှစ် သတ်ခံရတယ်၊ ရေနစ်သေတယ်။ ဒါက လွတ်အောင်ပြေးနိုင်ခဲ့တဲ့ သူတွေဆီက ကြားရတာပါ။ လွတ်ခဲ့တဲ့ အထဲမှာ ကျနော့် အမတွေ ပါပါတယ်။ မဆလက လည်း အဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ကျောင်းသား ၄၀ ဟာ အချုပ်ကားပေါ်မှာ အသက်ရှုကြပ်ပြီး သေဆုံးတယ်လို့ တရားဝင် သတင်းထုတ်ပါတယ်။
ဇွန် ၂၁ မှာ လုံထ်ိန်းတွေနဲ့ ကျောင်းသားပြည်သူတွေနဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် ထိပ်တိုက်တွေ့ပါတယ်။ မြေနီကုန်းမှာပါ။ ဆန္ဒပြ ကျောင်းသားတွေကို ရက်ရက်စက်စက် ရိုက်နှက် ဖြိုခွင်းတာကို မျက်စိရှေ့မြင်နေရတဲ့ ပြည်သူတွေဟာ တွေ့ရာ တုတ်တွေ၊ အုတ်ခဲတွေ ဆွဲပြီး လုံထိန်းတွေ ကို တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ကျောင်းသား ၃ယောက်၊ လုံထိန်း ၃ယောက် (ဒါမှမဟုတ် ၆ ယောက်စီ၊ သေချာ မမှတ်မိပါ) အသက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို ကျနော့် မိဘတွေ၊ ဦးလေးတွေ၊ အကိုတွေ၊ အမတွေ အကုန်မျက်မြင် ကြုံခဲ့ရတာပါ။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ လုံထိန်းတွေရဲ့ နောက်ဆုံးပွဲပါ။ နောက်ပိုင်း စစ်တပ်က ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်တာပါ။
စိန်လွင်ရဲ့ ခုနစ်ရက် သက်တမ်းကတော့ ဆက်တိုက် ပစ်ပွဲကြီးပါ။ ချာတိတ်ကျနော့် အတွက် အဲဒီတုန်းက သေနတ်သံဟာ သီတင်းကျွတ် ဗျောက်အိုးလောက်တောင် မကျယ်တော့ဘူးလိုပါပဲ။ နေ့တိုင်းကြား၊ နေ့တိုင်းပြေး၊ နေ့တိုင်းပုန်း ပါ။ လမ်းပေါ်တင်မက အိမ်တွေပေါ်ကနေ ကြည့်ရင်ကို လှမ်းလှမ်းပစ်တတ်ပါတယ်။ မြောက်ဥက္ကလာမှာဆို လေယာဉ်တွေတောင် သုံးခဲ့ပါတယ်။ ၈ လေးလုံးနေ့ကတော့ အဆိုးဆုံးလို့ ဆိုပါတယ်။ ကျနော်အိပ်နေပြီ ဖြစ်လို့ ဘာမှ မသိ၊ မကြားခဲ့ပါဘူး။ နောက်နေ့ ၉ ရက်နေ့ ကတောင် ကျနော့်အတွက် ပိုဆိုးတယ်လို့ ထင်ခဲ့တာပါ။ ကျနော့် ဒိုင်ယာရီထဲမှာ ၉ ရက်နေ့မှာ ပိုပစ်တယ်လို့ မှတ်မှတ်ရရ ရေးထားခဲ့ပါတယ်။ တနေကုန် ပစ်သံခတ်သံတွေ ကြားရပါတယ်။
အဲဒီ ၉ရက်နေ့က စစ်ကိုင်းမှာ ကမ္ဘာက သေချာ မသိတဲ့ စနစ်တကျ ကြိုတင်ကြံစီတဲ့ လူသတ်ပွဲကြီး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ပါခဲ့တဲ့ အကိုတယောက် ပြန်ပြောပြပါတယ်။ စစ်ကိုင်း ဆန္ဒပြသူတွေဟာ ရဲစခန်းကို ဦးတည်ချီတက် ကြပါတယ်။ ရဲစခန်းရှေ့ လမ်းပေါ် သံဆူးကြိုးတွေနဲ့ တားထားတဲ့နေရာမှာ လူအုပ်ကြီးရပ်သွားပါတယ်။ အဲဒီ နေရာဟာ တိုက်တွေကြားထဲပိတ်နေတဲ့ နေရာပါ။ သံဆူးကြိုးရှိမှန်း မသိတဲ့ နောက်က လူတွေက ရှေ့ဆက်တိုးဖို့ လုပ်၊ ရှေ့ဆုံးကလူတွေက သံဆူးကြိုးတွေနဲ့ ငြိ၊ ရောက်ရက်ခတ်နေတုန်း ရှေ့ဘက် ရဲစခန်းထဲကရယ်၊ ဘေး နှစ်ဖက် နှစ်ချက် တိုက်တွေပေါ်ကရယ် ကျည်ဆံတွေ ဒလဟော ရောက်လာပါတော့တယ်။ ညှပ်ပူးညှပ်ပိတ် အပစ်ခံလိုက်ရတဲ့ ပြည်သူတွေဟာ စုစုပေါင်း ၃၀၀ကျော် တရက်တည်း ကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အလောင်းတွေကို စစ်တပ်က ဧရာဝတီမြစ်ထဲ မျှော်ချခဲ့တာ မြစ်အောက် ရွာတွေမှာ လိုက်ကောက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
၈၈ ပြစ်ခတ်မှုတွေကို သက်သေ ထွက်ဆိုနိုင်တဲ့ တကယ်ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပစ်ခဲ့တဲ့ လူတွေဆိုလို့ ဒီ စစ်ကိုင်းရဲစခန်းက လူတွေပဲ ကျန်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကို ပစ်ခတ်မှုအပြီး နောက်တရက်မှာ ပဲ ချက်ချင်းနယ်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်တဲ့။ ရာထူးလည်း တိုးသွားကြတယ်ဆိုပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်ကတော့ ဒီပွဲကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ရဲမှုးဟာ စစ်ကိုင်း(ဒါမှမဟုတ်) အနီအနားတနေရာမှာ အလွန်မြင့်တဲ့ ရာထူးနဲ့ ပြန်ရောက်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။ မြို့တွေပေါ်မှာ ပစ်ခဲ့ကြတဲ့ စစ်သားတွေကတော့ မဲသဝေါ နဲ့ မိုင်းယန်းမှာ ကုန်ပါပြီ။ ဒါဟာလည်း စစ်တပ်က ဒီနှစ်နေရာ စလုံးကို တမင်တကာ ဗကပနဲ့ ကရင်သူပုန်တွေဆီ အကျခံလိုက်တာလို့ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များက ကျနော်စကားပြောဖူးတဲ့ ဗိုလ်မှုးတယောက်က ပြောဖူးပါတယ်။ အရေးအခင်းမှာ ပစ်ခဲ့တဲ့ စစ်သားတွေဟာ မိုင်းယန်း၊ မဲသဝေါနဲ့ ကေအင်ယူ တပ်စခန်းအများအပြားကို သိမ်းခဲ့တဲ့ ပွဲတွေမှာ မတက်မနေရ အနောက်ကနေ သေနတ်နဲ့ ချိန်ပြီးတက်တိုက်ရင်း ကုန်သွားခဲ့ပါပြီ။ လှည့်ပြေးလာတဲ့ တပ်သားတွေကို တကယ်ကို သေနတ်နဲ့ ပစ် သေစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ထောင်ပေါင်းများစွာသော နုနယ်တဲ့ကျောင်းသားတွေ နယ်စပ်စခန်းတွေကို ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ အုပ်ချုပ်သူက တော်ယုံရက်စက်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာ နားလည်စေချင်ပါတယ်။ ဘယ်သူမဆို မိနဲ့ ဘနဲ့ ချစ်သူနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပြီး ပညာသင် အပူပင် ကင်းကင်းနေချင်တာချည်းပါ။
ဒါတွေဟာ ခဏ ခဏ ပြောလို့ ပျော်ရတာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အမှန်ကို ပြောမပြရင် သူတို့ ပြောတဲ့ လှိုင်းကြီးလေထန်ထဲပါပြီး ဦးနှောက်တွေ နစ်ကုန်မှာစိုးလို့ပါ။ ကိုယ်ကအမှန်တွေ ပြောမပြပဲ ကလေးတွေက သူတို့ရဲ့ အမှားသမိုင်းကြီးပဲ ကြားနေရရင် ဘယ်လောက်မှားမှား မှားတာကိုပဲ အမှန်ထင်သွားမှာပါ။ ကျနော်တို့ သိသမျှ၊ ကြားသမျှ၊ နားလည်သမျှကို ကျနော်တို့ရဲ့ ညီတွေ၊ ညီမတွေကို သင်ကြားပြောပြဖို့က ကျနော်တို့ အားလုံးရဲ့ တာဝန်ပါ။ ဒါမှ ကျနော်တို့ခေတ်မှာ မပြောင်းနိုင်ခဲ့သည်ရှိသော် သူတို့ခေတ်မှာ သူတို့တွေပြောင်းဖို့ ဆက်ကြိုးစားနိုင်မှာပါ။ နောက်မျိုးဆက် ကောင်းစားရေးအတွက် အခုမျိုးဆက်မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ လုပ်လဲ ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်မနေကြပါနဲ့။ အနည်းဆုံးတော့ နောက်မျိုးဆက်ကို အသိတရားလေး ကူညီပေးခဲ့ကြပါ။
Posted by generation96 at 11:19 AM 1 comments
ဗမာ မြန်မာ ပြီးတော့ Burman Burmese လေး ပြောချင်လို့။ အခုနောက်ပိုင်း Burman ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ တွေ့တော့လည်း အခုခေတ် အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ သဘောချင်း မတိုက်ဆိုင်ပြန်ဘူး။
…our original stand for the formation ofaNational Government which must consist of all Burmans and which must have all powers
First congress of AFPL, Jan 20, 1946
Let us therefore join hands, Britons, Burmans and all nations alike,…..
…..the great amount of freedom of the Burmese womanhood unique in the East full of the harems…..
I shall not go into enumeration of what our Patriotic Burmese Forces and guerillas have done and achieved as my time is short.
Aug 29, 1945, City Hall, Rangoon
Burman ကို လူမျိုး(တတိုင်းပြည်လုံး)အတွက် သုံးပြီး Burmese ကို ပိုင်ဆိုင်မှုပြ၊ သက်ဆိုင်မှုပြ စကားလုံးတွေမှာ သုံးပါတယ်။ ဘယ်မိန့်ခွန်းမှာမှ Burmese ကိုလူမျိုးနေရာ သုံးတာမတွေ့ရပါဘူး။
Dobama Asi-ayone ("We-Burmans Association")
နောက်ထပ် နမူနာတွေပါ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ မမေဓာရဲ့ ပျောက်ကြား-၉ post မှာအခုလို သွားတွေ့ပါတယ်။ ဆရာ ရွှေဒုံးဘီအောင်ရဲ့ ၁၉၄၅ခုနှစ်ရေး စာအုပ်ထဲကပါတဲ့။
WHETHER A KAREN OR A BAMA DOES EVIL, IT IS EVIL, IT IS EVIL DONE BY A BURMAN TO A BURMAN,
ဒါကိုကြည့်ရင် အဲဒီတုန်းက Burman ဟာ ဗမာပြည်တွင်းက တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။ ကရင်လည်း Burman ဗမာလည်း Burman ပါ။
သို့သော်လည်းပေါ့လေ။ နာမည်ကြီး wikipedia မှာ ဒီလိုရေးထားတာတွေ့ပြန်တယ်။
In British usage, inhabitants of Burma, no matter what their ethnicity, are known as Burmese, while the dominant ethnicity (speaking Burmese) is known as "Burmans".
In American usage, the meaning of Burmese and Burman are often the opposite of British usage: Burman refers to all the people of Myanmar, while Burmese refers specifically to the Burmese speaking ethnicity dominating the country.
နှစ်ကာလရွေ့လျောပြီး အသုံးတွေပဲ မှားကုန်သလား။ Research လုပ်တဲ့သူတွေပဲ အမှားတွေကို အမှန်ထင်သုံးရင်း မှားကုန်သလား။ ကျနော်နဲ့ ကျနော့် Research တွေပဲ မှားနေသလား။ ဟိုတုန်းက စာတွေ ဆက်ဖတ်ရအုံးမှာပ။
ဒါပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်ကို ကျနော် ယုံတယ်။ တို့ဗမာအစည်းအရုံးကို ယုံတယ်။ ဗကသ ကိုလည်းယုံတယ်။ အခု ဆရာရွှေဒုံးဘီအောင်ကိုလည်း ယုံပ။
Posted by generation96 at 2:35 PM0comments
ဒီနေ့ (ကို)ကိုကိုကြီး ရဲ့ ၄၅နှစ်မြောက် မွေးနေ့ပါ။ ခြောက်ထပ်ကြီးဘုရားဝင်းထဲက သာသနာ့ဂုဏ်ရည်ကျောင်းတိုက်မှာ သူ့ကိုလေးစားသူတွေ၊ ချစ်ခင်သူတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီကို မြတ်နိုးသူတွေဟာ သူ့မိသားစု၊ သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ သူတို့တတွေအတွက် ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ရင်း ၀ိုင်းဝန်းဆုတောင်းပေးကြမှာပါ။ ဒီမိုကရေစီရေးကို မြတ်နိုးသူတိုင်း၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေကို လေးစားသူတိုင်း တက်ရောက်ကြပါလို့ သူ့မိသားစုနဲ့ ၈၈ ကျောင်းသားတွေက တိုက်တွန်းထားပါတယ်တဲ့။
ကျနော် မလာနိုင်ပေမယ့် အကို ရပါစေလို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဆုတောင်းတော့ ပို့လိုက်ပါတယ်။ အကို နောက်မွေးနေ့တွေမှာ လွတ်လပ်တဲ့ တရားမျှတတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီအပြည့်နဲ့ ဗမာနိုင်ငံကြီးထဲမှာ အကိုချစ်တဲ့ သူတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
The photo which was taken before his first arrest in 1991, was extracted from voanews.com
Posted by generation96 at 12:29 PM0comments
ဒီကိစ္စကို သဘောတူတဲ့လူတွေရှိသလို သဘောမတူတဲ့လူတွေလည်း အပုံအပင်ပါပဲ။ စဉ်းစားပုံ မတူကြတာတွေ၊ တွေ့မြင်ရတဲ့ အဖြစ်အပျက် မတူကြတာတွေ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ရှိကြပါလိမ့်မယ်။ အခုရေးမှာက ကျနော့်အတွေး၊ ကျနော့်အမြင်။ သည်းခံ ဖတ်ပြီး ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ကြဖို့ပါ။
ကျနော် ခပ်ငယ်ငယ်တုန်းက စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့တာကို သိပ်သဘောမကျခဲ့ဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တရားပွဲတွေ အမြဲသွားတယ်။ NLDကလုပ်သမျှ ပွဲတွေ ဘယ်လောက်ပဲ အတားအဆီးတွေ ရှိရှိ ရောက်အောင်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စလေးမှာတော့ သဘောကွဲလွဲတယ်ပေါ့။ အဲဒီအချိန်က ကျနော်မြင်တာက ထိုးထွက်လာနေတဲ့ ဟိုတယ်ကြီးတွေ၊ ခပ်ပေါပေါ သောက်ရတဲ့ Pepsi ပုလင်းတွေ၊ ဈေးချိုချိုဝယ်ဝတ်နိုင်တဲ့ Daewoo ထုတ်အင်္ကျီတွေ၊ စက်ရုံကြီးတွေမှာ လခကောင်းကောင်းရတဲ့ ကျနော်တို့ ပြည်သူပြည်သားတွေပေါ့။
ဒီခပ်ချာချာ အတွေးတွေ မရှိတော့တာ ဆယ်စုနှစ်တခု ကျော်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် တချို့တချို့တွေ၊ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်တွေမှာ သံသယတွေရှိနေတုန်းမို့ ဘာကြောင့် ကျနော်ပြောင်းသွားသလဲ ရှင်းစရာ လိုလာပါတယ်။
ဧည့်သည်မရှိတဲ့ ဟိုတယ်ကြီးတွေ ကျနော်မြင်တယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ ဒေါ်လာရာနဲ့ချီ ရောင်းတဲ့ အင်္ကျီတွေ ထုတ်တဲ့ စက်ရုံကြီးတွေမှာ လုပ်တဲ့ လခကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အလုပ်သမလေးတွေ ကျနော်မြင်တယ်။ နောက်ပြီး ရတနာ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်း ဆိုတဲ့ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ရတဲ့ စီမံကိန်းကြီး ကျနော်မြင်တယ်။ ရတနာမှာ လုပ်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေ၊ ၀န်ထမ်းတွေ လခကောင်းပါတယ်၊ မငြင်းပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ကမ်းလွန်သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်းတွေမှာ လုပ်တဲ့ သူတွေ လခ ကောင်းကြပါတယ် (ဗမာပြည် အတိုင်းအတာနဲ့ ဆိုရင်ပါ)။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျနော်တို့ ဗမာပြည်ရဲ့ လူဦးရေ ဘယ်လောက်များများ လူနေမှုအဆင့် မြင့်လာတာ သင်မြင်ပါသလဲ။ ဘယ်သူတွေ ချမ်းသာ လာပါသလဲ။ လူဘယ်လောက်များများ ဆင်းရဲသွားပါသလဲ။ ဗမာပြည်ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လို တိုးတက်လာတာ တွေ့ပါသလဲ။ စစ်ကားသွားဖို့ ဖောက်တဲ့ ပိုက်ဆံမကုန်တဲ့၊ လုပ်အားပေးနဲ့ အကျဉ်းသားနဲ့ ဖောက်တဲ့လမ်းတွေ၊ လက်ချိုးရေလို့ရတဲ့ ခပ်သေးသေးတံတားတွေ ခဏမေ့ထားပါ။
စက်ရုံကြီးတွေက ဘယ်လောက်များများ ၀န်ထမ်း သက်တောင့်သက်သာ နေနိုင်တဲ့ အဆင့် ရောက်လာပါသလဲ။ ဒီစက်ရုံ ကြီးတွေက ရတဲ့ ဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်ရောက်သွားပါသလဲ။ ရတနာက နှစ်စဉ်ရတဲ့ ဒေါ်လာသန်း ရာနဲ့ချီတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်ရောက်သွားပါသလဲ။ သြော် ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲတွေကရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ၊ သစ်ခုတ်လုပ်ရေးကရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ၊ ဘိန်းခင်းတွေကရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေရော…။
ကျနော်မြင်တာပြောပြပါမယ်။ TE 11 စစ်ကားတွေ အစား တရုတ်လုပ် စစ်ကားတွေ မြင်ပါတယ်။ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာ တခါမှ မသုံးပေမယ့် ထပ်ကာထပ်ကာ ၀ယ်နေတဲ့ တရုတ်လုပ် တင့်ကားတွေ မြင်ပါတယ်။ အဲ ရှေ့တန်းမှာ မသုံးတဲ့ တရုတ်လုပ် ခဏခဏ ပျက်ကျတတ်တဲ့ စစ်လေယာဉ်တွေနဲ့ ရုရှားလုပ် MIG 29 တွေမြင်ပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံကမှ ချိန်းခြောက်ရန်မလုပ်ပေမယ့် တနေ့တခြား ကြီးကြီးလာတဲ့ စစ်တပ်ကြီးကို မြင်ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားကို အားကျပြီး မျောက်ပြဆန်တောင်းလုပ်ဖို့ အတင်းလိုက်လုပ်မယ့် Nuclear စီမံကိန်းကြီးနဲ့ ဒါကြီးကို ကိုင်တွယ်မဲ့၊ ဓာတ်ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ရင် အရင်ဆုံးသေကြမယ့် ရုရှားကို လွှတ်ထားတဲ့ စစ်သားတွေကို မြင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာတင် အိမ်ပေါင်း ၃၃လုံးထက်မနည်း ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ကိုသန်းရွှေရဲ့ အိမ်တွေအကြောင်း ကြားပါတယ်။ သိပ်သေချာတဲ့ အိမ်ကြီးကြီးတလုံးစီကိုလည်း ရန်ကုန်နဲ့ အခု ကြပ်ပြေးမှာ google earth ကနေမြင်ပါတယ်။ ဒေါ်လာ ဘီလီယံနဲ့ချီ ကုန်ကျတဲ့ သုညကနေ စဆောက်တဲ့ ကြပ်ပြေးကြီးကို မြင်ပါတယ်။
စိန်ဘယက်တွေ၊ စိန်ဆွဲကြိုးတွေ၊ စိန်လက်ကောက်တွေအပြင် လူမမြင်ရတဲ့ ခြေထောက်မှာပါ ရွှေခြေကျင်းကြီးတွေ ၀တ်ထားတဲ့ သတို့သမီးနဲ့ သူ့ရဲ့ ဒေါ်လာသန်းချီကုန်တဲ့ မင်္ဂလာပွဲလည်း မြင်သပေါ့။
ဟုတ်ကဲ့၊ ရွှံ့တောထဲက လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာ၊ ဝေဘာဂီ စတဲ့မြို့တွေ၊ မိုးရွာရင် ရေကြီးကြီးနေတဲ့ မြို့တော် ရန်ကုန်ကလမ်းတွေ၊ အယ်ဒီဆင်ကို နေ့တိုင်း ဂုဏ်ပြုနေတဲ့ ဗမာပြည်ကြီးနဲ့ ရိုးပြတ်တွေကြားက တက္ကသိုလ်လို့ ခေါ်တဲ့ အဆောက်အအုံတွေကိုလည်း မြင်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း ၁၈နှစ် ကြာပါပြီ။ ၁၈နှစ်အတွင်း တကယ့်ကို သိသိသာသာ တိုးတက်လာတာကတော့ ပြောပြပြီးတဲ့ အတိုင်း စစ်တပ်ကြီးနဲ့ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်နေသူများပါပဲ။ သူတို့နဲ့ ပေါင်းစားကြတဲ့ လူတချို့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဘိန်းဘုရင်တွေလည်း ကြီးပွားကြသူတွေထဲ ပါသပေါ့။ အဲဒီအပြင်တော့ ….. ရှိသေးရင် ပြောပြကြပါအုံး။
လမ်းများ၊ ဟော်တယ်များ၊ ပွဲတော်များ၊ တံတားများ
(အလှုခံဖြတ်ပိုင်းတွေ ခြင်းထဲမှာ ပြည့်နေ)
အလယ်ပိုင်း မိုးနည်းရေရှား ရပ်ဝန်းဒေသက လူက ပြန်ပြောတယ်
နပ်ကျော်နေတဲ့ လူတွေ စာရင်း ပြုစုပေးပါရစေ။
(ရီတယ်၊ ဒေါသထွက်တယ်၊ နေကာမျက်မှန်တပ်တယ်)
စစ်တုရင်ကွက် ရွှေ့သလောက်တော့ မလွယ်ပါ။
မှန်ခြင်း မှားခြင်း ဒဿနတွေကို
မိကွဲဖကွဲနဲ့ ဘ၀လက်ဆောင် ရလိုက်တယ်။
ခန္ဓာကိုယ် သွက်ချာပါဒ ဖြစ်နေတဲ့ လူတွေရဲ့
ဘွဲ့လက်မှတ်များ၊ မျှော်လင့်ချက်များ၊ ရည်မှန်းချက်များ
(ပြာပုံအဖြစ် ရုပ်ကြွင်းတွေ ဖြစ်လို့နေ)
လူတွေဟာ တဖြည်းဖြည်း စက်ရုပ်တွေ ဖြစ်လာပြီး
ကိုယ်ကျင့်တရား ဆိုတာလည်း ခမ်းခြောက်ကုန်တော့တာပါပဲ။
နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစု အင်္ကျီဒီဇိုင်းတွေ ပြောင်းဝတ်ရင်းက
၁၉၉၆ ထုတ် ရာစုသစ်မြစ်ကျဉ်း ၊၄၊ ထဲက ပါပဲ။ ၂၀၀၆ မကုန်မခြင်းတော့ ၉၆ ရဲ့ ကျနော်ကြိုက်တဲ့ ခံစားလွယ်တဲ့ ကဗျာတွေကို အမှတ်တရ ပြန်တင်နေမိဦးမှာပါ။ ၁၀ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပဲ ဆိုပါတော့။ အနုပညာနဲ့ တိုက်ခဲ့သူတွေ၊ တိုက်နေသေးသူတွေ ကိုလည်း ဂုဏ်ပြုရာ ရောက်အောင်ပါ။
Posted by generation96 at 1:38 PM0comments
We were born in Burma
We were born as Burmans
We speak Burmese
We eat Burmese food &
We were taught to love Burma
Yet we left Burma
With the hope of returning democratic Burma
Burma hasn’t changed
Government hasn’t changed
We are not in Burma
Our families will be rich with the money we send
Do we need to fight for freedom?
Do we need to fight for democracy?
We are safe and we are fine after all.
(Dedicated to all Burmans staying abroad who fall into the category of “who cares”)
Written in 2005 after witnessing the disappointing turn out at Daw Su’s Birthday held at Toapayoh monastery. Even though more than 300 T-shirts were snatched FREE, barely less than 50 people wore the shirts on that day.
Posted by generation96 at 6:58 PM 1 comments
Posted by generation96 at 2:13 AM2comments
Posted by generation96 at 2:36 PM0comments
Posted by generation96 at 10:19 AM2comments
Posted by generation96 at 2:03 PM0comments
ကိုမင်းကိုနိုင်အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးတွေ မြန်မာblogတွေမှာ တွေ့ရတာ အရမ်းကို ကြည်နူးစရာ၊ ပျော်စရာ ကောင်းပါတယ်။ သိပ်လှတဲ့ ဆုတောင်းလေးတွေပါ။
ဒီဆုတောင်းတွေကို ဖတ်ပြီး ကျနော်လို ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ သွေးမတော် သားမစပ်၊ ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် ဟိုးအဝေးကြီးက လူတယောက် ပျော်တယ်၊ အားတက်တယ် ဆိုရင် ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ မိဘတွေ၊ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ ဘယ်လောက်များ ပျော်လိုက်မလဲ။ ၈၈ မှာ သူတို့တွေ စွန့်လွှတ်ခဲ့ကြတုန်းက ကလေးသာသာ ရှိသေးတဲ့သူတွေ၊ မွေးကာစ ကလေးတွေ၊ လူ့လောကထဲ ရောက်တောင် မလာသေးတဲ့သူတွေက သူ့ကို ချစ်တယ်၊ လေးစားတယ် ဆိုတာသိရင် ကိုမင်းကိုနိုင်ရော ဘယ်လောက်များ အားတက်လိုက်မလဲ။ မြန်မာ ပြည်သားတွေရော ဘယ်လောက် အားရကြမလဲ။
အစ်ကိုတို့ တတွေလို ရှေ့ တန်းက မတွန်းနိုင်လို့တွန်းနိုင်သလောက်လေး နောက်တန်းကနေ ၀င်တွန်းလိုက်ပါတယ် အစ်ကို။ နဲတယ်များတယ် သဘောမထားပါနဲ့ ခင်ဗျာ။ - ကို--
ဟုတ်ပါတယ် ကို- -ရေ ကျနော်လည်း တွန်းနေပါတယ်။ တတ်နိုင်သလောက် တွန်းနေရအုံးမှာပါ။ အားလုံးကိုလည်း ၀ိုင်းတွန်းစေချင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ ပေးနိုင်တာ စိတ်အင်အားပါ။ လက်မှတ်တွေထိုး၊ အင်္ကျီအဖြူတွေဝတ် ကိုယ်လုပ်နိုင်တာလေး လုပ်ပေးပြီးတော့ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားကြရင် အောင်မြင်မှာပါ။
မွေးနေ့ဆုတောင်းကြတဲ့ သူတွေ၊ blog မှာဆုမတောင်းဖြစ်ပေမယ့် comment ရေးပြီး ဆုတောင်းကြတဲ့ သူတွေ၊ The week in white logo လေးနဲ့ blog တွေအားလုံးကို ကျနော်က ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့။
မွေးနေ့ဆုတောင်းlinkတွေပေးထားပါတယ်။ ကြည့်ပြီး ကြည်နူးပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။ ဆုတောင်းရေးတဲ့ blogger တွေကိုတော့ link လုပ်မယ်ဆိုတာ ခွင့်တောင်းထားပါတယ်။ အချိန်မရလို့ ခွင့်ပြုချက်မရပဲ တင်လိုက်တာကိုတော့ နားလည်ပေးပါနော်။
link deleted upon request
ကို- -ရေ တွန်းတာလေးက လှလို့ Title စကားလုံး သုံးလိုက်တယ်နော်။
Posted by generation96 at 9:39 AM 8 comments
Photo taken from ncgub. It was taken after his release in 2004 with his beloved parents.
On this day, you marked 44th year of your birth.
In this year, Burma marked 44th year under military rule.
You are again denied to see the free world.
Burma is again denied to beapart of the free world.
Burma would not forget you and
Burma would keep on fighting for you.
For you are the man who sacrifices so much,
For you are the man who Burma needs so much.
Haveapleasant birthday today
Wherever you are and whatever you are doing.
Posted by generation96 at 11:09 AM 1 comments
Self aggrandizing soldiers, monks in limousines, rather-be-thieves-than-dignified poor moral bankrupts are the people who support this government - from moe-aye.
"နောက်လိုက်" ဆိုတဲ့အထဲမှာ ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ် အဓွန့်ရှည်အောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ပါဝင်ပတ်သတ်နေတဲ့သူ တွေနဲ့၊ နဲနဲလေးမှ မဆန့်ကျင်ပဲ ပျော်ပျော်ကြီးနေ နေသူအားလုံးပါ ပါတယ်။ - from dathana
Posted by generation96 at 10:18 AM 1 comments
Posted by generation96 at 10:33 AM0comments
The proof of how SPDC and USDA organize the massacre
Posted by generation96 at 10:00 AM0comments
There were 600 (official number by the junta) of us against probably more than 600 of the soldiers. Every direction I looked, they were no end in sight.
Our arms were interlocked. Our minds united. A colonel walked down from the other side of the road. I kept my eyes on him. It was3minutes before 6am on 3rd December 1996 on my watch. The morning light was yet to shine.
He stopped just after our back line. His eyes were filled with hatred; his expression showed he regarded us as his enemies. He then yelled with rage “YITE” (BEAT). The sticks fell onto the heads of the students sitting at the far end from all three directions the army positioned (I did not know whether the police at our left involved in it). They were obviously told to aim the head. They beat and they dragged the students and threw them onto the open trucks. In no time, our first lines were broken and they started beating second lines of students. Some of us stood up and shouted to stop the beatings and offered that we board the truck on our own. But the soldiers didn’t care anymore. They had no intention to stop. They cursed us and they beat us. Be itaboy oragirl. Many of us were already running towards the truck to avoid beatings. And ran did we.
Another group of soldiers were waiting between us and the trucks and greeted those managed to run through with their sticks. I dived underatruck with along with many others. We then emerged from the other side of the truck and tried to board it. However, I noticed the lines of soldiers stationed on the other side of the trucks were also doing the same beatings. Somehow, I managed to board the truck but barely. The truck was overcrowded and I had to tightly grab another fellow’s neck already on it. He knew my situation and he grabbed me with one hand as well. Many were still trying to board overcrowded trucks by then.
Then, another one emerged from underneath the truck and try boarding from the same place as mine. I tried to pull him up with my one hand. He grabbed my hand strongly and tried his best to jump in. In the mean time,asoldier was beating him all along right under my very eyes. Within seconds, he fell backwards on the road. It was not only him who was beaten on the process of boarding the trucks. All of us, including girls were beaten badly that day.
They had to bring in dynas again since the army trucks were not enough for all of us. Those who had to climb down from the trucks and transfer to the dynas were beaten again until they reach on board. These soldiers beat us when we were sitting peacefully, they beat us when we were running, they beat us when we were boarding the trucks. From the start of the beatings until the end, none of us responded physically or even verbally. Yet, they called us destructive elements.
The portrait of Bogyoke was broken and lying on the ground with the flags of fighting peacock. (We were later told that right after the colonel’s order; the soldiers kicked crashed the Bogyoke portrait held by our leader Ko Soe Tun before hitting him on the head. We also learnt the fighting peacock flag was brought down and stepped over by the soldiers.) There were slippers, wallets, purses, water bottles, and bags scattered on the street. These were all lost along with the donation the students received from the people.
Soldiers were positioned in the front seats as well as standings at the backs of the trucks. The line of trucks carrying us inched towards Kyaik Kasan ground just before daybreak.
Posted by generation96 at 5:57 PM3comments
White Expression campaign initiated by 88 generation student group kicked start yesterday with encouraging results in Burma. The campaign will last until 18 Oct, which is the 44th birthday of (Ko) Min Ko Naing. 88 students asked for people staying abroad to participate in the campaign as well.
If Burmese people living under brutal military rule dare to wear white, there is no reason why people staying abroad should not. Wearing white here is nothing compare to those who sacrifices their lives in many jails of Burma. It is the least we can do. We need to show our support and we need to let know those in Burma that we care.
Turn the Burmese gathering places into seas of white. Let the respective governments know that we Burmese are truly united against the junta and we truly want democracy, freedom and human rights in Burma.
"Wear White, Stay White"
Posted by generation96 at 3:18 PM0comments
We do not know when they will be released.
We do not know whether they will ever be released.
We do know they will live forever in our memories.
From here, I bow my head.
From here, I wish my best.
For them, for us, for Burma.
Posted by generation96 at 11:54 PM 1 comments
Posted by generation96 at 7:15 PM0comments